यस्तो छ तपाईको सोमबारको भाग्य महादेवको दर्शन गरि कार्तिक १ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् – Paluwa Khabar
सोमबार , मंग्सिर १३, २०७८
अषोज ३१, २०७८ आइतबार 63
मेषः आफन्त तथा साथी भाईसँग राय नमिल्दा दैनिक कामहरु प्रभा’वित हुन सक्छन् । राजनीति तथा समाजसेवामा समय खर्चिनेहरुले काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । निर्णय गर्न नसक्दा हातमा आईसहेको काम अरुले नै फुत्काउनेछन् । घरजग्गा तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला वि’वाद तथा कि’चलो हुनसक्छ । तरपनि अध्ययन तथा खोजीमुलक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । शेयर बजार तथा व्यापारमा गरेका लगानी फस्टाएर जानेछ ।
वृषः न्यालयसँग सम्वन्धीत कामहरु थाँती राख्नुहोला । खेलकुद तथा पराक्रमी क्रिर्याकलापमा भाग लिने अवसर आएपनि भनेजस्तो नतिजा निकाल्न मुस्किल पर्नेछ । बन्धुबान्धब हरुसँग मनमु’टाव सिर्जना हुनेछ भने सैद्धान्तिक राय बाजिनेछ । समय मध्ययम रहेकोले चो’टपटक लाग्ने तथा स्वास्थ्यमा सम’स्या देखापर्नेछ । पढ्ने लेख्ने काममा मन नजानाले अरुभन्दा पछी परिनछ ।
मिथुनः वन्द व्यापारमा लगानी गरी आर्थिक क्षेत्र बलियो बनाउन सकिनेछ । पहिले लगानी गरेका रकमहरु उठ्ने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग रामे भएर जानेछ भने आफन्तको सहयोगले हरेक क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकिनेछ । रमाईलो जमघटमा सामेल भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रयत्न गर्दा भैपरी आउने सम’स्याहरु सहजै समाधान हुनेछ ।
कर्कटः पुराना कमिकमजोरी सुधार्दै नयाँ काममा हात हाल्न सकिनेछ । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर आउनेछ । माया प्रेममा रमाईलो गर्दै समय व्यातित हुनेछ । घर परिवार तथा आफन्तको सद्भाव तथा सहयोग पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक अवस्था सुदृड हुनेछ । राजनीतिज्ञको लागी समय राम्रो रहेकोछ ।
सिंहः दैनिक खर्च बढ्ने तथा भैपरि आउने सम’स्याले सताउनेछ । स्वास्थ्य सम्वन्धी स’मस्या बढ्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेकोछ । सापट लगिएका रकम नउठ्नाले दैनिकी असहज हुनेछ । धन तथा भौतिक सम्पती हरा’उन तथा लुटि’न सक्छ ध्यान दिनुहोला । तापनी लामो दुरिको विदेश यात्राको गतिलो योग रहेकोछ भने विदेशी सामानकोे व्यापार फस्टाएर जानेछ ।
तुलाः आफन्त तथा बुवा सरहका मानिससँग म’नमुटाव सिर्जना हुनेछ । व्यापार व्यावसायबाट न्यून आम्दानी हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्न नसकिने हुँदा ईज्जत प्रतिष्ठामा कमिको महशुस हुनेछ । सरकारी काममा सेवा प्रवाह गर्नेहरुको ढिलासुस्तिले समयमा काम बन्ने छैन । अध्ययन तथा अध्यापनमा समय बढि नै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वृश्चिकः सामाजिक तथा परोपकारी काममा मन जानेछ भने धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको तय हुनेछ । व्यापारमा आज गरीने लगानीबाट भविस्यमा राम्रो नाँफा कमाउन सकिनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा भनेजस्तो प्रगती गर्न सकिने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । राजनीतिज्ञले जनताको काम गरी पद प्राप्त गर्ने समय रहेकोछ । जोडीहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ ।
धनुः सं क ट व्यावस्थापनमा चालिएका कदमहरु निअर्थक हुनेछन् । गोप्य योजनाहरु बाहिरिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा दिदी बहिनीहरुले पनि सहयोग गर्ने छैनन् । अल्छि गर्ने बानिले काम बाकी रहनेछ भने शरिर स्वास्थ्य न’हुनाले आलस्यता बढेर जानेछ । व्यापारमा लगानी गरीहाल्ने समय नरहेकोले केहि समय पर्खनु नै राम्रो हुनेछ ।
मकरः बन्द व्यापार फस्टाएर जाने तथा नयाँ ठाउँमा लगानी गर्ने अवसर जुर्नेछ । व्यावसायकै शवालमा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । भौतिक सम्पती तथा विला’शी वस्तु प्राप्त हुने योग रहेकोछ । माया प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ भने जीवन साथिको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममूखि काम गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
कुम्भः पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा पछी परिने चिन्ताले सताउनेछ । स्वास्थ्यमा कम’जोरि देखिने हुँदा दैनिक कामकाजमा समस्या पैदा हुन सक्छ ख्याल गर्नुहोला । व्यापारमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुहोला आज गरीने व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकै समय खर्चनु पर्नेछ । विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा सामेल नहुनुहोला । न्यायिक निर्णयहरु तपाईको पक्षमा नआउन सक्छ । प्रेममा मनमुटाब सिर्जना हुनेछ ।
Prevकम्पनीले नक्क’ली टिकट दिएर विमानस्थलमा अलपत्र नेपालीको एनआरएनएद्वारा उद्दार गरि स्वदेश फिर्ता।
Nextबो’क्सी भन्दै यसरि गरे भाउजूको ह’त्या हेर्नुहोस्)
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कडा जवाफ राम जन्मेको प्रमाणित गर्न सुडेनी खोज्न कहाँ जाऊँ ?
१४ वर्ष दुबई बसेर फर्किएका भुवनसिंह च्याउ खेतीमा रमाउँदै
कतारमा ईलिगल रहेका नेपालीले कम्पनी खोजेर काम गर्न पाउने ! यि ठाउँमा सम्पर्क गर्नुहोला ….
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (774)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (494)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (477)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (474)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (432)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (403)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (370)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (360)
जापानद्धारा विश्वभरबाट बिदेशी प्रवेशमा प्र’तिबन्धको घोषणा ,कारण यस्तो !
कठै !सप्तकोसीले फेरि लियो अर्को ज्या न,यस्तो अवस्थामा श व फेला परेपछि सबै स्तब्ध भए
कतारले यी ३ देशका यात्रुमाथि लगायो प्रवेशमा रो’क…
कोरियामा गुडीरहेको मोनोरेल लिकबाट उछिट्टिएर खस्यो, ८ जना घा’ईते
बर्दियामा फेरी बा’घले मानिस खा’यो, भैंसी चराउन गएका थारुको आधा श’व भेटियो
१.	भर्खरै ब’न्जीजम्पका क्र’ममा डोरी चुँ’डिएपछि ८० फिट तल ख’सेर महिलाको मृ’त्यु !! (84)
२.	विमानस्थलमा लफडा, घु’स मागेपछि असई र जवानको जागिर चैट (73)
३.	सशस्त्र प्रहरीको बदमासी : घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी ल्याएर विवाह दर्ता गरे, वडाको समेत मिलेमतो (73)
४.	छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि बुवाले गो’ली हानी ‘एजेन्ट’को ह’त्या गरे (64)
५.	केहीबेर अघि काठमाडौंमा घटेको यो अत्यत दुखदायी घ’टना (63)
६.	गुडिरहेको बसमाथि ढुंगा ख’स्दा 40 जनाको मृ’त्यु (61)
७.	बुबाको मृ’त्यु पर्खदै छन् यी साना छोरीहरु,कैयौं दिन देखि भोकै लडिरहेका छन् (भिडियो पनि हेर्नुस्) (52)
८.	अधिवेशन सकेर हिँडेका ओलीलाई माथिको आदेश भन्दै बाटोबाटै प्रहरीले प’क्रा’उ गरेपछि… (51)